HomeWararka CiyaarahaWararka Xanta Suuqa kala iibsiga Haaland, Tagliafico, Kana, Bettinelli, Vydra
November 28, 2020 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga 0
Agaasimaha ciyaaraha Borussia Dortmund ee Michael Zorc ayaa sheegay inay u muuqato in weeraryahanka reer Norway ee Erling Braut Haaland uu sii joogi doono Dortmund muddo dheer. 20 jirkan ayaa heshiiska uu kula jiro kooxdani waxa uu soconayaa illaa badhtamaha sannadka 2024, laakiin qandaraaskiisa ayaa la rumaysan yahay in lagu burburin karayo 75 milyan oo Euro xagaaga 2022. (Bild Sport)
Difaaca bidixe ee reer Argentina ee Nicolas Tagliafico oo lala xidhiidhinayay Chelsea iyo Manchester City ayaa ogolaaday inuu heshiis muddo kordhin ah u saxeexo kooxdiisa Ajax, waxaase la filayaa inuu sii joogi doono illaa dhamaadka xili ciyaareedkan. (De Telegraaf)
Difaaca midig ee Liverpool ee Trent Alexander-Arnold oo 22 jir ah ayaa sheegay in jadwalka xili ciyaareedkan uu ‘diidayo caqliga saliimka ahi’. (Evening Standard)
Kooxaha Premier League ayaa loo sheegay inay yareeyaan taageereyaashooda loo ogol yahay inay garoomada yimaaddaan, ayna ka dhigaan 1,000 qof oo kaliya. Masuuliyiinta Waaxxda Badqabka Garoomada ayaa waxay sheegtay inay qasab tahay in jamaahiirta laga yareeyo 2,000 waqtigan hore ee tijaabada ah. (Telegraph)
Difaaca Anderletcht ee Marco Kana oo 18 jir ah ayaa la sheegay inuu ku riyoonayo inuu tago Liverpool. (Watfoot)
Laacibka garabka weerarka reer England ee Angel Gomez oo ah 20 jir iskaga tegay Manchester United xagaagii ayaa sheegay inuu iska diiday inuu koox kale u wareego kaddib markii uu Lille u saxeexay xagaagii. (Independent)
Agaasimaha farsamada AC Milan ee Paulo Maldini ayaa qirtay inay xiisaynayso kooxdiisu laacibka garabka weerarka ee Florian Thauvin oo ah 27 jir Faransiis ah oo uu heshiiskiisa Marseille dhamaanayo xagaaga 2021. (Telefoot)
Tababarihii hore ee Manchester United ee Sir Alex Ferguson ayaa ballan-qaaday inuu laba qaadhaan ku caawin doono hawl-galka quudinta ee Marcus Rashford uu ka wado England. (Times)